Trump iyo KIm Jon Un oo qarka u saaran in ay fooda is daraan | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Trump iyo KIm Jon Un oo qarka u saaran in ay fooda...
Trump iyo KIm Jon Un oo qarka u saaran in ay fooda is daraan
Mareykanka(SONNA) Xukuumadda Pyongyang ayaa waxa ay soo saartay jawaabtii ugu horraysay ee ay ka bixisay booqashada Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku marayo qaaradda Aasiya,gaar ahaan wadamada xulufada la ah Mareykanka.
War qoraala h oo ka soo baxay Madaxtooyada Waqooyiga Kuuriya waxaa gaashaanka loogu daruuray waxa ay ugu yeertay booqashada loogu durbaan tumayo dagaalka, taas oo aanan ka hor istaagi doonin Waqooyiga dhismaha barnaamijkeeda Nukliyeerka ee Dalka Kuyaala Assia ee Waqooyiga Kuuriya.
Madaxweynaha Wadanka Mareykan ayaa Dhanka kale bartiisa Twitter-ka ku qoray in uu la yaaban yahay sababta hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu u aflagaadeeyay kaddib markii uu yiri waa nin da’ ah, hasayeeshee uusan weligii cay ugu jawaabayn oo uusan oranayn waa “nin gaaban oo buuran”.
Waxaa sidoo kale lagu sheegay Bayaankan in hadallada aan ka fiirsiga laheyn ee uu ku dhawaaqayo ninka da’da ah ay dalkaasi ku sii dhiirigelinayaan inuu sii wado dhismaha barnaamijkiisa nukliyeerka.
Donald Jey Trump oo ku sugan waddanka Vietnam ayaa bartiisa Twitter-ka ugu soo jawaabay hadalka Kuuriyada Waqooyi isagoo su’aal galiyay sababta uu u aflageedaynayo Kim Jong-un oo uu ugu yeerayo inuu yahay nin da’ ah, isagoo sheegay in uusan weligii ninkaasi ugu yeeri doonin inuu yahay nin gaaban oo buuran.
Previous article20.000 oo dollar oo la duldhigay horjooge Shabaab katirsan oo Kenya kusugan